Izinto ze-10 okufanele wazi ngaphambi kokuthatha i-DMAA | I-AASraw
/Blog/Gallery/ Izinto ze-10 okumelwe wazi ngaphambi kokuthatha i-DMAA
Posted on 11 / 28 / 2018 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
I-DMAA iyisidakamizwa esenziwe ngokwenziwa ngokusebenzayo esiza ekwakheni umzimba, ukushiswa kwamafutha omzimba kanye nokwenza ngcono inkumbulo yesikhashana kanye nesenzo esicacile. Lesi sihloko sihlanganisa izinzuzo ze-DMAA nemiphumela emibi ye-1,3-dimethylamylamine.
Ukuqonda ini is I-DMAA kufanele kube yinto eyodwa noma yiliphi umdlali ophuthumayo wokusebenza okufanele agcizelele ngaphambi kokuba asebenzise phansi ukwesekwa. I-DMAA okuyinto ifomu elincane le-dimethylamylamine yamakhemikhali yisidakamizwa esasiyakholelwa ngaphambili ukuthi siyiphunga elivela kumafutha geranium yemvelo. Nokho, ngokucwaninga, sekusekwe ukuthi 1, i-3 dimethylamylamine isakhiwe ngokwenziwa ngokwenziwa ngama laboratories.
Ebizwa nangokuthi i-1,3 DMAA, umuthi uhlanganyela ngesakhiwo esifanayo nezidakamizwa ezithathwe i-germanium. Yingaleso sizathu abantu abaningi bacabanga ukuthi i-DMAA nayo iphinde isigaba esifanayo semithi. Ukuzivocavoca kokuqala kwe-DMAA yisikhathi esivumelana nabantu abasebenzisa ukwesekwa njengoba kusetshenziswe kakhulu labo abafuna ukuqala imizimba yabo nokwehlisa imihlangano.
I-DMAA powder yafika kuqala emakethe ngu-Eli Lilly neNkampani ku-1944. Isidakamizwa sathola ukusetshenziswa okuningi kwezokwelapha njengenhlamba yokuphuza. Lesi sidakamizwa sasetshenziselwa le njongo njengoba sitholakala ukuletha imiphumela efanayo ekusetshenzisweni kwe-ephedrine kanye ne-pseudoephedrin.
Ekuqaleni, abantu abaningi bakholelwa ukuthi i-DMAA itholakala kumafutha e-rose geranium. Ngenxa yalesi sizathu, kuvamile ukuthola amafemu amaningi akhiqizayo Ukwengeza kwe-DMAA ekhombisa izithombe zezitshalo zezitshalo ze-rose geranium ezifana nezimpande neziqu. Kodwa-ke, naphezu kwalokhu inkolelo ihlala isikhathi eside, izivivinyo zama-laboratory ku-DMAA zibonise ngenye indlela.
Kuye kwafakazelwa ukuthi i-DMAA itholakala ngokwenziwa ngokweqile ebhokisatri futhi akuyona into yemvelo njengoba sekukholelwa isikhathi eside. Ngemuva kokungeniswa kwayo kokuqala emakethe, lesi sidakamizwa sasithengiswa kakhulu njengabadlali abahlatshwa umxhwele ngemiphumela yaso. Lokhu kwaba yi-1983 ngenkathi isengezo sisusiwe emakethe.
Ukuhoxiswa kwabangelwa yizimangalo ukuthi akuphephile ukudayiswa kuma-pharmacies asesidlangalaleni. Lokhu kuvinjelwa kubangele ukusweleka kwesidakamizwa nakuba kusengathengiswa emakethe emnyama. Ukudayiswa komphakathi kwe-DMAA ukwesekwa kwaphinde kwaqala ngo-2006 lapho kuthengiswa ngaphansi kwegama elisha, i-Geranamine.
I-DMAA eyengeziwe ayithengiswanga kuphela. Esikhundleni salokho, yayifakwe ekutheni isisindo sokulahlekelwa kwesisindo futhi sahlukaniswa njengesidakamizwa sokuthuthukiswa komsebenzi. Ukubuyiswa kabusha kwezidakamizwa emakhemikhali omphakathi kuye kwacela izingxabano ezingaphezulu mayelana nokuphepha kokusetshenziswa komdlali othuthukisayo.
Ukukhathazeka kuye kwaba okubucayi kangangokuthi Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa (FDA) kuye kwaze kwacela abakhiqizi bezinsiza ukuba baqinisekise ukuthi kufanelekile ukusetshenziswa ngaphandle kokubangela imiphumela emangalisayo. Amazwe afana neCanada abuye aphakamisa ukukhathazeka ngenhloso yayo, futhi ivinjelwe.
Akuphephile futhi ukuthi kusetshenziswe abadlali abadlala imincintiswano njengoba ku-2010, futhi i-World Anti-Doping Agency isanda kubhala njengezinto eziyingozi ezingavunyelwe ukusetshenziswa. Ngakho-ke, umgijimi otholakala ukuthi usebenzisa lesi sidakamizwa cishe kungenzeka avunyelwe ukuba ahlanganyele emidlalweni yokuncintisana. Ngenxa yezimpikiswano ezihlobene nokusetshenziswa kwayo, i-DMAA nayo ivunyelwe emasosha ase-US.
Ukwengeza kusanda kuhoxiswa ezitolo zempi ukulawula ukusetshenziswa kwayo. E-New Zealand, ukusetshenziswa kwezidakamizwa nakho akuvumelekile. Kubhekwa njengento engekho emthethweni e-United States njengamanje.
Iyini iDMAA esetshenziselwa?
Indlela yokusebenza yangempela, i-DMAA ayizange ibonwe. Kodwa-ke, lesi sidakamizwa sicatshangelwa ukulingisa isenzo se-adrenaline yemvelo. Uma usetshenziswa, i-DMAA ithinta ngokuqondile isimiso sezinzwa zomphakathi.
Isidakamizwa saziwa ukuthi sikhiqize ukugqugquzela okuphezulu okufana nokusetshenziswa kwe-caffeine. Kodwa-ke, imodi yesenzo se-DMAA ihlukile kuleyo ye-caffeine. Uma kuthathwe, i-DMAA ibangela ukukhiqizwa kwe-noradrenaline okuyinto i-hormone esebenza ngesikhathi sokucindezeleka noma ukwesaba.
I-hormone iklanyelwe ezinhlobonhlobo ze-adrenal ezitholakala ngenhla nje kwezinso. Lapho ekhululwa, i-hormone isakazwa egazini, futhi lokhu kubangela ukwanda kwenhliziyo.
Ukukhiqizwa kwe-noradrenaline kwenza futhi isimiso somzimba sikhulule i-glucose ezigciniwe ze-glycogen. Lokhu kuholela ekuthuthukisweni kwamandla emisipha yomzimba, futhi yilokho abagijimi abaningi abafisa ngaphambi kokuzivocavoca. Ukusetshenziswa kwe-DMAA kuzoholela ekuthuthukiseni kwezinye izici ezifana nokuqapha, ukugqugquzela nokuphendula okwesikhashana.
Lesi esinye sezizathu eziyinhloko ukuthi kungani i-DMAA isetshenziswa kabanzi ngabadlali ngaphambi kokuqala iseshini yokuzivocavoca. Isidakamizwa sinikeza umuzwa wamandla aphezulu okwenza umgijimi afune ukuhlanganyela emsebenzini ozodla amandla angaphezulu. Ukusetshenziswa kwe-DMAA kugcinwe abagijimi kusukela kumzwelo wesilinganiso wamandla oza nesenzo se-caffeine esivame ukusetshenziswa.
I-DMAA iyithuthukisa i-caffeine, futhi labo abayisebenzisa isikhathi eside bangase baqale ukuhlakulela umlutha. Lokhu kusho ukuthi ukusetshenziswa okulawulwa kuyadingeka. Uma lisetshenzisiwe, lenza ubuchopho buveze umuzwa wokukhulisa amandla amakhulu.
Ukuphakama okukhulu kwegazi kuhambisana nalokhu. Njengomphumela wale ndlela yokusebenza, abantu abaningi bathambekele ekuhlukumezeni lesi sidakamizwa. Kodwa-ke, abanye abagijimi basebenzisa lesi sidakamizwa ngenhloso eyakhayo emizimbeni yabo. Okulandelayo kukhona okunye ukusetshenziswa okuhle kwe-DMAA:
I-1. Ukuvutha kwamafutha
Ngokujwayelekile, umzimba ushisa amafutha ngokweqile. Noma kunjalo, lokhu kungase kwenzeke ngesilinganiso esisheshayo kunalokho okufunayo. Ukuphuthumisa inqubo ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuye kwamukelwa ngabadlali abaphuthumayo bokusebenza. Ngokuyinhloko ezinye zalezi zithako ziyi-steroids ezifana Ama-Nootropics.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezinjalo kuthuthukisa ngokwanele izinga lokushisa. I-DMAA iphumelela njengamanye ama-supplements aziwayo ekushiseni amafutha amaningi. Izikhathi eziningi zokuzivocavoca zenzelwe ukufeza imiphumela eminingi, okuyinhloko phakathi kwabo ukunciphisa amafutha omzimba ngokweqile anika umzimba isikhalazo esingathandeki.
Amafutha angaphezu kwamandla abuye abe engozini empilweni yomdlali njengoba isimo esinjalo singakwandisa ukuvinjelwa kwemithanjeni yegazi. Uma lokhu kwenzeka, kuyoba nokugeleza okuncane kwe-oksijini egazini futhi umsebenzi ojwayelekile womuntu uyoba nomthelela kakhulu. Manje isihluthulelo sokugwema isimo esinjalo ngukusebenzisa izidakamizwa ezifana ne-DMAA enika umzimba wakho ngamazinga aphezulu asemandla.
Uma esebenza ngamandla, umsebenzisi uzimisele ukuhlanganyela emisebenzini ezodla amandla, futhi ngenxa yalokho, kube nokunciphisa amafutha omzimba anobungozi futhi angathandeki. Isidakamizwa sitholakale sisebenza kahle ekushiseni kwamafutha omzimba , futhi lokhu kubalulekile kubadlali abafuna ukufezekisa lokhu ikakhulukazi ngesikhathi se-offseason cutting. Ukusebenza komuthi cishe kungenamkhawulo.
Uma kuhlanganiswe nokuvuselela okufana ne-caffeine, i-DMAA itholakale ukuthuthukisa umsebenzi we-metabolic nge-35%. Lokhu, kuyasiza ekuthuthukiseni izinga lokushisa kwamafutha ngomkhawulo omkhulu ophawulekayo. Isidakamizwa sisebenza ngokuqinisekisa ukuthi siyabangela ukushisa kwamafutha ngaphambili ngaphambi kokuba umzimba ugcizelele ukuthi uvele ngokwemvelo.
Njengoba isenzo se-DMAA sixhumene ngqo nesistimu yenzwa yomphakathi, lesi sidakamizwa siqinisekisa ukuthi senza lesi senzo ngesivinini esheshayo. Ekuvuseleleni, i-CNS iphendula ngokunciphisa ukusabela kwamakhansela okuvumela amandla okushisa. Ngakho-ke, kungaba kuhle ukuqhathanisa isenzo se-DMAA namanye amafutha amaningi okushisa emakethe.
I-2. Ukwakhiwa komzimba
Into ebaluleke kunazo zonke ngaphambi kokuzivocavoca amandla. Yingakho udinga ukubheka ukuthi yini engakunikeza yona lezi zinhlamvu zamandla ukuze uqhubeke. Ukusebenza kokuqala kwe-Mesomorph
yinto enhle yokunikeza umakhi womzimba ukuqala kwekhanda elifanele okudingayo ukwenza umsebenzi wakho uphumelele.
Njengoba kufakwe ekuqaleni, umuthi uyaziwa ukunikeza imiphumela efana ne-pseudoephedrine. Lesi sidakamizwa sizothola umsebenzisi 'kwimodi' ephezulu. Lokhu kunikeza eyodwa ngesitoreji esikhulu samandla okudingekile ukukhipha isisindo.
Ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu, isidakamizwa esinika amandla aphezulu kufanele sithathwe ngaphambi kweseshini yokuzivocavoca. Lokhu kuzobamba umsebenzisi ngamanzi amandla okusho ukuthi yiziphi zonke abagijimi abaphuthumayo abazenzayo abafuna ukuba izinsuku zabo ziqale ngenothi eliphezulu. Isidakamizwa esinjalo senza lokhu ngokuthonya izinqubo ezithile zomzimba zomzimba.
Ngemuva kokudla, isidakamizwa sithuthukisa i-vasodilation. Le nqubo eyenzeka ngokujwayelekile lapho kusetshenzwa ukushisa ngokweqile emkhathini. Umzimba uphendula ngokukhulisa ubukhulu bemithanjeni. Lokhu kusho ukuletha igazi elingaphezulu endaweni yesikhumba yokupholisa.
Imithi eminingi yokuthuthukisa ukusebenza iqukethe i-nitric oxide ekhuthaza ukwandiswa kwemithambo yegazi ngokusebenzisa i-vasodilation eyenziwe. Lokhu kuyinzuzo eyengeziwe kumdlali, ikakhulukazi ngesikhathi a ngaphambi kokusebenza. Uma sikhulu, indawo yokubhebhetheka igazi eningi iyathuthukiswa kakhulu.
Lokhu kuzohlinzeka umgijimi ngesabelo sokuhamba kwegazi okungakaze kube khona ngaphambi kokusetshenziswa kwesidakamizwa. Ngokulandelayo, ukuqeqeshwa okukhulu kunokwenzeka, futhi umdlali uthola amandla amaningi okuthuthukisa ukuthuthukiswa kwamasipha.
Kodwa-ke, ukusetshenziswa kwe-DMAA kule nhlonipho kutholakale ukuthi kuyaphikisana nalokho abantu abaningi abangalindela mayelana nokusetshenziswa kwezidakamizwa ezithuthukisa ukusebenza. Esikhundleni sokuthuthukisa i-vasodilation njengezidakamizwa eziningi ze-nitric oxide, i-DMAA ihlukile. Kubangela i-vasoconstriction ejwayelekile phakathi nezikhathi lapho izinga lokushisa emkhathini liphansi.
Ngaleso sikhathi, umzimba unzima ukugcina ukushisa kwawo, futhi lokhu kubangelwa ukuhoxiswa kwegazi esikhwameni. Nokho, lokhu kwenzeka lapho umthamo uphezulu kakhulu futhi akufanele kube ukukhathazeka komuntu ohlela ukuthatha i-DMAA.
I-3. Isiza ukuthuthukisa imemori yesikhathi esifushane nesenzo esicacile
Wonke umuntu angathanda ukukhumbula konke okudingayo. Kodwa-ke, lokhu akuvamile ukuthi impilo yabantu ibhekene nezinkinga eziningi ezenza kube nzima ukuthi lokhu kwenzeke. I-DMAA ingaba ukwesekwa okuwusizo ngalokhu ngaphambili.
Ucwaningo olwenziwe ngabasebenzisi balesi sengezo luveze ukuthi labo abathintekayo babekhumbule isikhathi esifushane kunokuba basebenzise. Ngakho-ke, nakuba kungenjalo abantu abaningi bayothatha lesi sidakamizwa ngenhloso yokufeza lokhu, kuzofika njengomphumela wokungezelela wokusetshenziswa kwayo. Futhi lokho kungenye yezinzuzo eziyinhloko abantu abaningi abavuna ekusebenziseni i-DMAA ngisho noma lokhu kwenzeka ngaphandle kokuhlela kwabo.
Isenzo esiphakeme se-reflex futhi siyisici abadlali abaningi abafisa ukuzizwa. Ukusetshenziswa kwe-DMAA kubangela ukuthi umzimba uqaphele kakhulu, futhi lokhu kuthuthukisa ukusebenza komsebenzi. Lokhu kusho ukuthi abasebenzisi be-DMAA bayasebenza kakhulu ngesikhathi sokwakha umzimba noma emincintiswaneni. Isidakamizwa sisebenza ngokuthuthukisa izinga lomzimba womzimba.
Lokhu kubangela ukuthi umzimba uqhubekele ukuhamba ngesilinganiso esisheshayo kunokujwayelekile. Lokhu kuboniswa ngokomzimba ngokwenza umuntu osebenzayo futhi uqaphile. Kodwa-ke, ukuphela kokuphela kwalokhu okuqondile ukuthi ukusetshenziswa kwemithi emincintiswaneni kuvunyelwe.
Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwayo ukuthuthukisa isenzo se-reflex ngesikhathi sezemidlalo akuvumelekile. Kungenzeka kusetshenziselwa abagijimi ngesikhatsi se-offseason ukufezekisa ukuqhuma nokuthuthukiswa kwejubane.
Ingabe i-DMAA Supplements Safe?
Lokhu kufanele kube ukukhathazeka kwanoma ubani ohlanganyela emidlalweni yokuncintisana. Isidakamizwa sibalwe phakathi kwezidakamizwa ezingaphephile zokusetshenziswa kwenhlangano ye-doping yomhlaba. Ezinye izidumbu eziningi ziye zavimbela ukusetshenziswa kwe-DMAA kwezinye iziphathimandla. Noma kunjalo, lesi yisihloko esiye sabheka ukubuka okungafaniyo.
I-United States 'Yokudla Nezidakamizwa Ezokuphatha (FDA) i-ejensi ibheka izithako ze-DMAA ukuba zingaphephile ukusetshenziswa komuntu. Le nhlangano ithi akukho ulwazi mayelana nesenzo se-DMAA esikufanelekelayo ukuba yisidakamizwa esiphephile sokusetshenziswa. Ewebhusayithi ye-ejenti, umzimba ucebisa abantu ukuthi bagweme ukusebenzisa izidakamizwa ngazo zonke izindleko njengoba kungenzeka ukubabeka engozini yezingozi zempilo.
Esinye sezikhathazo eziyinhloko ze-FDA yikhono lezidakamizwa ukudala isisoconstriction. Lokhu baphikisana kuyisandulela somfutho wegazi ophezulu ongagcina uholela ekufeni uma ungasetshenziswanga masinyane. Eminye imiphumela yokuphefumula engase ibe nakho nokusetshenziswa kwe-DMAA ihlanganisa ubunzima ekuphefumuleni, ekuhlaselweni kwenhliziyo nangendlela ephakeme yokubamba.
Ngokusho kwe-FDA, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kungase kubangele ukuphazamiseka kwezinzwa njengoba kusebenza kakhulu ngokuthonya isimiso sezinzwa zomphakathi. Lokhu kungaba yingozi njengoba kungabangela ukukhubazeka kanye nezinye izinkinga ezibulalayo.
I-FDA iye yaqina kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi i-DMAA equkethe izithako ziqedwa emakethe ngokugcwele. Isihluthulelo phakathi kwezinyathelo ezihlukahlukene abazenzile ukukhipha amakhemikhali ezidakamizwa ngezinhlamvu ezibavuselela ekuthengiseni i-DMAA equkethe izithako. Uma kwenzeka ukuthola izithako ezinjalo emashalofini, i-ejensi ibuza abathengisi ukuba babhubhise futhi bayeke ukwenza olunye umyalo kusuka kubakhiqizi.
Kuze kube manje, amafemu amaningi aye avumelana. Lo mkhankaso uqale ngo-2012, futhi uthathe umphumela ogcwele njengoba kukhona ukuthengiswa okuphansi kakhulu kwama-DMAA supplements. Kubuye kube namacala lapho amanye amafemu aqhubeka nokukhiqiza i-DMAA ngisho nangemva kokucelwa ukuba ayeke yi-FDA.
Amacala anjalo athunyelwe ku-2013 ngenkampani eqondile ebizwa ngokuthi i-USPLabs yenqaba ukuyeka ukukhiqiza izithako. I-FDA imise ukusebenza kwayo, futhi inkampani ebucayi bekufanele ibhubhise imikhiqizo eyayisevele imakethe. Inani lazo lokuthengisa elihloswe lilinganiselwa ku-$ 8 million.
Lokhu kubonisa ukuthi i-ejensi izimisele kangakanani ukuya ekuqinisekiseni ukuthi ukukhiqizwa kwezidakamizwa ze-DMAA kumiswa futhi akusikho isidakamizwa esisodwa esifanayo esithola izakhamizi zezwe. I-FDA iye yahamba phambili futhi yabhala amagama ahlukahlukene abakhiqizi abangasebenzisa ukuvimbela abathengi ukuba bazi ukuthi badla i-DMAA. Lokhu kwenzeka ngemuva kokuba i-ejensi iqaphele ukuthi izinkampani eziningi zikhiqiza lesi sidakamizwa ngamagama adidekile ukuvimbela abathengi ukuba bangaboni ngokuqondile umuthi ovinjelwe.
Amanye amagama akhethiwe ahlanganisa i-Geranamine ne-Methylhexanamine. Ezinye izinkampani zibonisa ukuthi isengezo sinezicucu zezitshalo zeGeranium. Lokhu kuyisibonakaliso sokuba khona kwe-DMAA. I-FDA ixwayisa abathengi ukuba baqaphele noma yikuphi okunye okunezela okuvela kuGeranium.
Imikhawulo ifana namanye amazwe afana neCanada neNew Zealand nabanye abaningi emhlabeni. Ukukhathazeka okuyinhloko kuwo wonke umphumela wayo ohlelweni lokuphefumula. I-anti-doping ejensi yomhlaba iphinde ibhalwe I-DMAA powder phakathi kwezidakamizwa ezingaphephile ukusetshenziswa komuntu. Lokhu kusho ukuthi kuvinjelwe ukusetshenziselwa abagijimi abathintekayo emincintiswaneni efana neNdebe yoMhlaba.
Kodwa-ke kuvunyelwe ukuba kusetshenziswe emincintiswaneni ethile ikakhulukazi kumasethini aphansi angaphakathi kwamazinga avunyelwe. Kodwa-ke, kuhle ukuqiniseka ngokuphathelene nemingcele yomncintiswano umuntu ahlanganyela kuyo ngaphambi kokuthatha umuthi ukugwema ukufika enkingeni.
Isihloko sokuthi i-DMAA iphephile sithathe esinye isisindo ngemuva kwezinsolo ezihlukahlukene phakathi kwe-FDA nezinye izinkampani. Lezi zinkampani ziphikelela ukuthi kwakungekho umonakalo mayelana nokudayisa isandiso se-narcotic. Ucwaningo olulodwa lwaveza ukuthi i-DMAA yayingumkhiqizo wesitshalo seGeranium futhi lokhu kwaphikiswa yi-FDA.
Kodwa-ke, le nhlangano ayizange inikeze ubufakazi obusekelayo ukuze kubuyiselwe izimangalo zayo ukuthi lesi sidakamizwa sitholakale ngobuciko. Ngokusho kukadokotela owacwaninga izimangalo zokungahambi kahle kokusebenzisa isengezo, akukho mphumela omubi ongalindela kumuntu ovuthiwe ophilile osebenzise isilwane ngokufanele. Lo muthi wagcizelela ukuthi inani le-DMAA elitholakala ezisekelweni zangaphambi kokusebenza kwakungezansi kwalokho okubhekwa njengobuthi onokusetshenziswa komuntu.
Kwesinye isimemezelo, abantu abasha ababesebenzisa i-DMAA njengento ekhuthazayo phakathi kwamaqembu atholakele ukuthuthukisa isifo esifanayo, isifo socerebral. Lokhu kwaqinisa ngokwengeziwe isimangalo se-FDA ngokuphathelene nokuphepha kokusebenzisa i-DMAA kuma-supplements. Kodwa-ke, olunye uphenyo lwalufakazela ubufakazi obusekela u-FDA ngezicucu ngemuva kokuba kutholakale ukuthi abantu abasha ababhekene nabo babesebenzisa umthamo omkhulu kakhulu wezidakamizwa.
Kwavezwa ukuthi bathatha amaphilisi ngalinye eliqukethwe ku-600mg wezinto ezisebenzayo. Lokhu kwakuphakeme kakhulu njengendawo ejwayelekile, kanti inani elilindelekile lizungeze i-60mg kwelinye iphilisi yokufakaza. Lokhu kusho ukuthi laba bantu abasha badla izikhathi eziyishumi kulokho okwakufanele bathathe.
Ngokweqile, kusukela ekubukeni kwesayensi, lesi sidakamizwa singabhekwa njengesidakamizwa esiphephile sokusebenza ngaphambi kokuthi izidakamizwa ezifanele zithathwe. Uma i-DMAA ithathwa emithonjeni ephakeme kune-75mg, kunamathuba okuphakama kwengcindezi yegazi kumazinga angafuneki, ngakho-ke kufanele kucatshangelwe. Isidakamizwa kufanele sisetshenziswe ngabantu abangenawo umlando wegazi eliphezulu esikhathini esidlule njengoba ukusetshenziswa kwayo kungadala isimo.
Futhi, nakuba i-FDA ingavunyelwe yizinkampani eziningi ezikhiqiza lesi sidakamizwa, zinephuzu ngokuphepha kokusetshenziswa kwe-DMAA. Ngakho-ke akudingeki ukuhlambalaza ukukhathazeka kwabo futhi uqhubeke ukuthenga izithako ezivela emakethe omnyama. Ukubonisana nodokotela ngaphambi kokusetshenziswa kwe-DMAA pre-workout powder kuyadingeka.
Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi imiphumela efunayo ifinyelelwa ngaphandle kokugcoba ukuphepha kwezempilo komsebenzisi.
Yini okudingeka ukwazi ngaphambi kokuthatha izithako ze-DMAA?
Kukhona amaqiniso amaningi ukuthi noma yiliphi umdlali ophuthumayo okufanele ahlangabezane nalo ngaphambi kokuxazulula iDMAA njengesidakamizwa sokuqala sokusebenza. Ezinye zalezi zinto zihlanganisa imiphumela emibi engase ihlangane nayo kanye nezinzuzo oyozivuna kusukela ekusebenziseni kwayo.
Okuyinhloko phakathi kwezinto okudingayo ukwazi ukuthi imiphumela yokusebenzisa lesi sidakamizwa iyafana nalokho okungahle kwenzeke ngemuva kokusebenzisa i-cocaine ne-methamphetamine. Lokhu kusho ukuthi amathuba okuthuthukisa umlutha kakhulu kakhulu njengoba ephakama phezulu phakathi kokugqugquzela okunamandla kunazo zonke. Kumele uqaphele ukuthi kungenzeka uvule umzimba wakho kwesinye sezidakamizwa eziqine kakhulu njengoba uzama ukuthuthukisa ukusebenza kwakho.
Ukuze ugweme amathuba okuba umlutha, kufanele uqinisekise ukuthi ulandela ngokuqinile lokho okukholelwa ukuthi udokotela wakho uphephile kakhulu empilweni yakho. Kubalulekile futhi ukuba uqonde ukuthi ukusebenzisa izidakamizwa kuzoba nomthelela ohlelweni lwezinzwa eziphakathi ngqo. I-DMAA yenza ngendlela efana ne-caffeine ngokunciphisa izinga lokumukelwa kwe-CNS okwenza umzimba wakho uqaphe kakhulu.
Isidakamizwa sinamandla kune-caffeine futhi sizonikeza umzimba wakho amandla okutshala okudingayo ukuze uqale iseshini yakho yokuzivocavoca ngenothi eliphezulu. Ngakho-ke kubalulekile futhi ukuhlola umthamo owudlayo njengoba umuthi uthonya ngokuqondile enye yezingxenye zomzimba ezibucayi kakhulu. Endabeni ebikwe ku-2012, iqembu labantu abasha lasebenzisa ukusebenzisa lesi sidakamizwa ngesikhathi seseshini.
Zidla izikhathi eziyishumi ngaphezu kwalokho okudingekile ngesilinganiso esisodwa sesikhathi. Inhloso yayiwukuba 'phezulu' ngokushesha, futhi lokhu kwaphenduka ukuhlehlisa kwabo. Isidakamizwa sithinte isimiso sabo sezinzwa zomphakathi, futhi iningi litholakala ukuthi linomdlavuza we-cerebral okuyisifo esibulalayo.
Abasebenzisi futhi kufanele baqonde ukuthi ngokungafani nezinye izinto eziningi ezingaphambi kokusebenza eziqukethe i-nitric oxide, i-DMAA ibangele i-vasoconstriction ye-veins. Lokhu kusho ukuthi umuntu othathe amaphilisi e-DMAA uzoba nemithambo yegazi egubhayo kunomunye ongakwenzi. Lesi simo singaba sengozini uma kwenzeka kumuntu onenkinga yokucindezeleka kwegazi njengoba kungenzeka ukuthi wandisa ubuhlungu besifo.
Ngakho-ke, umuntu obhekene nengcindezi yegazi ephakeme kufanele agweme ukusebenzisa i-DMAA.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa kungenzeka kubangele ukwanda kwegazi nokuzwa kwamandla aphezulu. Ukwenzela ukuxhaswa nezinye izidakamizwa ezisebenzayo kungaba yingozi ngoba lokhu kungabangela umzimba wakho ube namandla amakhulu ongakwazi ukusingatha. Kunconywa ukuqonda ukuthi i-DMAA ngokuyinhloko isengezo sokuqala sokusebenza esingasetshenziselwa ezinye izinjongo.
Abanye abantu baye basisebenzisa njengesidakamizwa sokuthuthukisa ubulili, kepha lokhu akulungile kakhulu. Ingaholela ekudluleleni ekubeni i-coma uma ihlukumezekile futhi lokhu kufanele kucatshangelwe ngaso sonke isikhathi ngesikhathi sokusebenzisa.
Ukuzivocavoca kokuqala kwe-DMAA kanye nemiphumela emibi yokusebenza
Ngemuva kokusetshenziswa kwe-DMAA, abanye abantu baye babhekana nemiphumela emibi yokusebenza okubandakanya i-nausea nokuhlanza. Lokhu kuvamile, futhi kusho ukuthi umzimba wakho cishe usabela ngokungalungile kumuthi. Kodwa-ke, ukuhlanza nokuhlanza izinhlanzi kungase kungabangeli ngokuqondile ukusetshenziswa kwe-DMAA. Amakhemikhali afakwe ezincelweni ezinezinye izakhi, kanti futhi zingabangela ukuhlanza.
Ngaphandle kwalokho, eminye imiphumela yangaphambi kokusebenza ivame ukusetshenziswa nokuvuselela okufana ne-DMAA. Lokho kufaka:
Ukuphazamiseka ukulala amaphethini
Izithako eziningi ziza ngezigaba zabantu abavunyelwe ukusebenzisa, futhi okubalulekile phakathi kwabo kubandakanya omama abalahlayo nalabo abakhulelwe. Isizathu salokhu kungenxa yokuthi, uma kwenzeka abesifazane besifazane abakhulelwe, ukusebenzisa izidakamizwa kungenzeka kakhulu ukuthonya ukuthuthukiswa kwengane engakazalwa. Kodwa-ke, nakuba ulwazi oluningi lukhona ngokuphathelene nokusetshenziswa kwezidakamizwa eziningi kumaqembu ahlanganiselwe abantu, lokhu akulona iqiniso ngeDMAA izidakamizwa zangaphambi kokusebenza.
Kukhona ulwazi oluncane kakhulu mayelana nalokhu. Ngakho-ke, labo abahlose ukusebenzisa i-DMAA njengezidakamizwa zangaphambi kokusebenza futhi abakhulelwe noma abalahla kufanele bayeke ukwenza kanjalo njengoba kunolwazi oluncane kakhulu mayelana nemiphumela emibi engalindelekile. Lokhu kuyoba indlela ephephile kunokuba ubeke phambili umsebenzisi emiphumeleni engakaze acabange ngayo.
Isidakamizwa se-DMAA sichazwa njengesisusa. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka ukuthi kuthinte kabi ukuthi kungenzeka ukuhlinzwa okuphephile ikakhulu uma kuthathwa ngaphambi kokusebenza. Ngakho-ke ukugwema isimo esinjalo, kuhle ukugwema ukuyisebenzisa uma usethelwe ukuhlinzwa.
Kunconywa ukugwema ukuthatha noma yini evuselelayo ngaphambi kokuhlinzwa. Lokhu ukugwema ukucindezelwa kwegazi okungaba yingozi ngesikhathi sokuhlinzwa.
Lona umphumela ovelele kakhulu ofana nabantu abasebenzisa i-DMAA. Lokhu kungenxa yokuthi izidakamizwa ziyisisusa futhi izidakamizwa eziningi zaleli klasi ziyaziwa ukuthi zenze umfutho wegazi ophezulu ikakhulukazi lapho uhlukunyezwa. I-DMAA iholela ekunciphiseni kwemithambo yegazi, futhi lokhu kubangela ukuba igazi ligele ngesivinini esisheshayo kunokujwayelekile okubangelwa umfutho wegazi ophezulu.
Ngenxa yalomphumela ohlangothini, ukusetshenziswa kwe-DMAA kutholwe ukudala ezinye izifo ezimbi njenge-stroke ye-cerebral. Uma kwenzeka lesi sibonakaliso, umsebenzisi kufanele agweme ukusebenzisa izidakamizwa ngokushesha. Lokhu kungenxa yokuthi ukusetshenziswa kwayo okuqhubekayo kungenzeka ukukhulisa izimpawu futhi kungaholela ekufeni.
Nokho, kungenzeka ukuvimbela ukucindezelwa kwegazi eliphezulu ngokusebenzisa ukusetshenziswa okulawulwayo. Lokhu kuzokwenza imiphumela emihle kakhulu uma ihlinzekwa yimithi ozohlolwa ukuze inqume ukuthi isilinganiso esifanele siyini.
I-DMAA ihlala isikhathi esingakanani ohlelweni lwakho?
Indlela ejwayelekile kunazo zonke yokuphatha i-DMAA ikhuluma ngomlomo. Lapho kuthathwa ngale ndlela, lesi sidakamizwa sithatha imizuzu eyisishiyagalombili ukuze singene emgodleni wegazi lomthengi. Noma kunjalo, imiphumela ngeke izwakale ngokushesha njengoba izidakamizwa eziningi zinalokho okubizwa ngokuthi isikhathi sokuphila. Lesi yisikhathi esidingekayo ukuthi umuthi uhlakazeke futhi ukhululeke izithako ezisebenzayo emzimbeni ukuze usebenzise.
Ingxenye yokuphila ye-DMAA iphathelene namahora we-8. Ngakho-ke, umuntu ohlose ukukhulisa umzimba wakhe ngaphambi kweseshini yokuzivocavoca kufanele athathe imithi ye-8 amahora ngaphambi kokuthi anike isikhathi esanele sokuba umuthi ungene emzimbeni.
Ngemuva kokusetshenziswa kwalesi sidakamizwa, umuzwa jikelele wokuba ophezulu unolwazi. Ngokuvamile, lokhu akuwona umuzwa wokuthi abantu abaningi bangathanda ukubhekana nakho konke ngesikhathi lapho ikakhulukazi lapho bengasebenzi. Ngakho-ke, kunesidingo sokwazi ukuthi yisiphi isikhathi esithathwe yisidakamizwa sokuxoshwa emzimbeni ngemuva kokusetshenziswa.
Ngokwesilinganiso, lesi sidakamizwa sigcinwa emzimbeni mayelana nosuku lwehora le-24 ngemuva kwalokho imizwa engasenayo.
Izinzuzo ze-DMAA ye-Fat Burning
Mhlawumbe, uke wazwa izinkolelo eziningi namaqiniso amaningi mayelana nekhono le-DMAA ekulahlekeni kwesisindo futhi ungathanda ukwazi ukuthi yiyiphi into ezwakalayo. Eqinisweni, iqiniso lokuthi i-DMAA izithako zingakusiza ukuchitha isisindo esikhulu esisindo ngezindlela ezihlukahlukene.
Okokuqala, isithasiselo se-Dimethylamylamine singakusiza ukuthi ugxile kakhulu ekugxilweni nasekukhuthazeni ekuthuthukiseni ukubekezelela kwakho ubuhlungu namandla. Ukunyuka kwamandla nokubekezelela ubuhlungu kuzokusiza ukuba ufunde ngokuphumelelayo ukuqeqeshwa kwesisindo ngokuphumelelayo.
Uma kuziwa ekushiseni kwamafutha omzimba, i-1 3 Dimethylamylamine ingenye yama-burners amafutha avela kakhulu e-thermogenic. Njengoba nje iningi lamafutha amaningi ahloniphekile, i-DMAA ibangela ukushiswa kwamafutha ngokushesha kunokujwayelekile kuvame lapho ukushiswa kwamafutha kungeke kwenzeke khona.
Ingabe uyazibuza Yini okwenza i-dmaa? ukushisa amafutha emzimbeni wakho?
I-DMAA ikhuthaza amandla akho ngokusebenzisa i-vasoconstriction, inqubo efaka ukuvinjelwa kokugeleza kwegazi lakho. Ukuvinjelwa kwegazi okuvinjelwe kubangela ukukhula kwemisipha kanye nokugqugquzela imisipha. Ngokwenza kanjalo, izinga lakho lokunciphisa umzimba liyakhula, okuholela ekushiseni okusheshayo nangokwengeziwe kwamafutha omzimba.
Izakhiwo ze-DMAA, i-ephedrine nama-amphetamines zihlanganyela ngokufana okuningi. Ngalokhu, i-DMAA ingashukumisa isimiso sezinzwa zomuntu esiyinhloko, okwenza ubuchopho bukhulule i-norepinephrine. Futhi, kwenza ama-receptors womzimba we-alpha ne-beta akhule umsebenzi we-noradrenaline, ngaleyo ndlela ivuselela uhlelo lwe-adrenergic receptor ngokungaqondile.
Ukuhlanganiswa kokubili kwezenzo kuholela ekwandiseni izinga lomzimba lomzimba kanye nokuhlukunyezwa kwamafutha avela emathangeni adipose ukukhiqiza amandla - le nqubo ibizwa ngokuthi i-lipolysis.
Umphumela we-DMAA unganyuka kakhulu uma usetshenziswa kanye nezinye izithako ezikhuthazayo ezifana ne-caffeine.
Uma isetshenziselwa ndawonye ne-caffeine, umphumela we-DMAA ngezinga lokunciphisa umzimba ukwanda ngo-35% ngenkathi ukushisa kwamafutha okwanda kunyuselwa ngaphezu kuka-169%.
Esicwaningweni samuva esenziwe ukuphenya ukusebenza kwe-DMAA ekushiseni kwamafutha, abadala abadala be-32 abanempilo yokufaka i-capsule eyodwa yenkxaso yayo nsuku zonke ngezinsuku ze-14 babhekana nokulahlekelwa okukhulu kwamafutha.
Imiphumela emibi ye-DMAA
Njenganoma imuphi omunye umuthi, i-DMAA kungenzeka ibe nemiphumela emibi uma ihlukunyezwa. Nakhu okunye okungenzeka Imiphumela emibi ye-DMAA:
1. Ukuphazamiseka kwesifo se-cerebral
Nakuba kungekho bufakazi obuxhumanisa i-DMAA ngokuqondile ne-cerebral haemorrhage, kukhona icala elibikiwe lomuntu owenze lesi simo ngemuva kokuthatha utshwala obunamandla no-DMAA mix. Kodwa-ke, kubalulekile ukuqaphela ukuthi i-DMAA akufanele isetshenziswe kanye nophuzo ngaphandle kwalokho umphumela ohlangothini oluthile lungase lube namandla.
2. Ukulimala kwesibindi
Umsebenzi oyinhloko wesibindi ukuhlunga igazi legciwane lokugaya ngaphambi kokuba livumele ukuba lidlulisele kwezinye izingxenye zomzimba. Ngaphandle kwalokho isibindi sinciphisa izidakamizwa futhi sinciphisa amakhemikhali.
Uma uthatha iphilisi noma i-DMAA, isibindi kufanele sibhekane nesithako sezidakamizwa / isengezo. Ngenxa yalokho, isibindi singase sibe nesimiso se-enzyme esingaqeda sibe yingozi. Isidakamizwa singase sibangele ukuvuvukala kwesibindi okungenzeka kube nomphumela wesikhathi sokulimala kwesibindi noma ukusila.
3. Umfutho wegazi ophezulu
Uma sicabanga ukuthi kuyisisusa, i-Dimethylamylamine ingandisa ukwanda kwegazi. Ngalokhu, abantu abacindezelwa yi-high blood pressure kufanele bagweme ukuthatha isidakamizwa noma izithako eziqukethe.
4. Ukushaya kwenhliziyo okungavamile (inhliziyo ye-arrhythmia)
Nakuba kungavamile, umphumela ovusa amadlingozi we-DMAA ungase uholele ekufubeni kwenhliziyo okusheshayo futhi lokhu kungase kuphuthumise ama-arrhythmiya enhliziyo kubantu ababhekene nesimo. Ngakho-ke, uma kwenzeka uhlinzekwe ukuhlinzwa, uyalwayelwa ukuba ungathathi i-DMAA amasonto amabili ngaphambi kosuku lokusebenza, ngaphandle kwalokho, ukwanda kwengcindezi yegazi nokushaya kwenhliziyo okungavamile ngenxa yomphumela wezidakamizwa kungase kuphazamise ukusebenza kokuhlinzwa.
Esicwaningweni esenziwe ukuphenya imiphumela ye-DMAA, lokho okutholwe kuboniswe ukuthi abadala abangu-12 abanempilo ngabanye abaye badla amakhisula amabili ka-OxyELITE Pro, isithako sokudla esine-Dimethylamylamine, sinezinga lentliziyo elikhulayo kanye nokuphakama kwengcindezi yegazi.
Noma kunjalo, abadala abadala abayisishiyagalombili abathinte umthamo we-25 mg we-DMAA babenesilinganiso senhliziyo evamile kanye nomfutho wegazi ngisho nangemva kokuthatha lesi sidakamizwa. Lokhu kubonisa ukuthi lesi sidakamizwa asinomthelela ngesilinganiso senhliziyo noma umfutho wegazi uma udliwe emthamo onjalo.
5. Ukunyuka kwe-Glaucoma
Ngaphandle kokuba nemiphumela evuselelayo, i-Dimethylamylamine nayo ibangela ukucindezelwa kwemithambo yegazi. Ukuhlanganiswa kwemiphumela emibili kungaholela ekukhuleni kwezinhlobo ezithile ze-glaucoma. Ngakho-ke, kunconywa ukuthi ugweme ukuthatha isidakamizwa uma une glaucoma.
6. Ukulimala kwesibindi
Kuye kwabekwa amacala ngokuphathelene nokulimala kwesibindi ngenxa yomsebenzi we-DMAA. Eminyakeni emihlanu eyedlule, abantu abangu-36 ababethathile i-OxyELITE Pro, isithako sokudla nge-DMAA njengesithako, babhekwa benomonakalo wesibindi. Esinye seziguli safa kanti abanye ababili baphila ngemuva kokufakelwa kwesibindi.
Kufanele kuqaphele ukuthi zonke iziguli ze-36 zithatha umthamo onconywayo wokugcwalisa kodwa i-27 yazo yayithatha inguqulo yamahhala ye-DMAA. Ngakho-ke, akulula ukusungula isakhi esiyingozi kulokhu okungeziwe.
7. Ukukhipha Ubunono
Ukusetshenziswa kwe-DMAA kuye kwaxhunyaniswa nokuphuma kwegciwane. Eqinisweni, amacala amathathu abantu abaye aphuma ebuchosheni ngemuva kokusebenzisa i-DMAA abikiwe. Noma kunjalo, sekuqinisekisiwe ukuthi izisulu zasezisetshenziselwe lesi sidakamizwa ngotshwala noma i-caffeine njalo.
Kwesinye sezimo, umuntu onempilo wathatha umthamo ophakanyisiwe we-supplement supplement oqukethe i-Dimethylamylamine futhi ngemva kwalokho, waqala ukuzwa ikhanda elibuhlungu elilandelwa ubuchopho.
8. Isifo senhliziyo
Kukhona icala elibikiwe lendoda eneminyaka engu-22 enempilo eyathuthukisa isifo senhliziyo ngemuva kokusebenzisa i-Jack3d, isengezo sokudla esiqukethe i-DMAA kanye ne-caffeine amasonto amathathu.
9. I-Nausea ne-Vomiting
Ucwaningo olulodwa olubukezwa ngemiphumela emibi ye-DMAA lubonise ukuthi i-15% yabantu abangu-56 abaye bathatha izithako ezinezidakamizwa (i-OxyElite Pro) abahlanza futhi bahlaselwa isisulu ngemuva kokuthatha izithako. Kodwa-ke, kwakungakho ubufakazi obukhombisa ukuthi ngabe i-DMAA ekwengeziwe eyabangela ukucabangela nokuhlanza noma ezinye izithako.
10. Ububuthakathaka besimanje
Umphumela ovame kakhulu ohlobene nokusetshenziswa kwe-DMAA ukulahleka okubonakalayo kwamandla ('crash') cishe amahora ambalwa ngemva kokuthatha lesi sidakamizwa. Noma kunjalo, akuwona wonke umuntu osebenzisa okuhlangenwe nakho kwezidakamizwa kulo mphumela ohlangothini.
Okunye eminye imiphumela emibi ye-DMAA ihlanganisa:
Ukufa (nakuba kungavamile)
Lokho kungenye yemiphumela emibi ye-DMAA. Noma kunjalo, azikho izifundo ezihlaziya kuphela imiphumela emibi yomuthi. Iningi lezifundo mayelana nomphumela wezidakamizwa zibandakanya izithako zokudla nge-DMAA njengenye yezithako zabo kunokuba izidakamizwa zihlukaniswe. Njengoba kucatshangwa ukuthi umthamo oqondile wezidakamizwa ezisekelweni awusungulwa, akukho ukuchithwa ekuphetheni ukuthi imiphumela emibi iwumphumela we-DMAA. Ezinye izithako kulezi zingxenye zingase zibe imbangela yemiphumela emibi.
Ngaphandle kwalokho, kwezinye izimo, imiphumela emibi ingenxa yokusebenzisa ngokweqile imikhiqizo esekelwe i-DMAA. Abasebenzisi abathile abaye babhekana nalezi zemihla yocala babike ukuthi bathathwe ku-1,000 mg nsuku zonke. Ezimweni ezinjalo, imiphumela ingagwenywa uma umuntu enamathela esilinganisweni esifanele esilinganisweni. Sizokukhuluma ngesilinganiso se-DMAA ngesikhathi esifushane.
Ngaphandle kwalokho, i-1, i-3 Dimethylamylamine itholakale ibe nomthelela omkhulu ohlelweni lwezinzwa zomphakathi uma lisetshenziselwa kanye nokuvuselela kwe-CNS noma i-nootropics ethinta izinhlelo ze-adrenergic. Lokhu kungabangela imiphumela emibi ehlukahlukene. Ngakho-ke, uma ufuna ukugwema imiphumela, qiniseka ukuthi awuhlanganisi i-DMAA ne-stimulants noma i-nootropic.
Futhi, kunconywa ukuthi izithako ze-DMAA akufanele zisetshenziswe nsuku zonke. Ngakho-ke, yimuphi umthamo ofanele we-Dimethylamylamine?
Umthamo we-dimethylamylamine ofanele uncike ezintweni ezihlukahlukene ezifana nobudala nesimo sezempilo somsebenzisi, phakathi kwezinye izimo. Noma kunjalo, okwamanje, akukho ulwazi olwanele lwezesayensi olungathenjelwa ukuthola isilinganiselwa esifanele salesi sidakamizwa.
Uma ngabe uthenge umkhiqizo we-DMAA we-fat / weight loss, qiniseka ukuthi ufunda futhi ulandela imilayezo yokusebenzisa kwelebula layo bese ubonisana nodokotela wakho, uchwepheshe wezemithi noma omunye ochwepheshe wezempilo ohloniphekile ngaphambi kokuyisebenzisa.
Ngokuvamile, isilinganiso sokuqala se-DMAA sisekwa ku-10 mg kuya ku-20mg. Noma ½ ukukhonza komkhiqizo ohlanganisiwe we-DMAA ozikhethelayo. Lokhu kuzokusiza ukuba ubone futhi uzizwe ukuthi lesi sidakamizwa singakuthinta kanjani uma usithatha umthamo ogcwele.
Njengoba isikhathi sihamba, ungase ukwandise umthamo ku-40 noma i-60 mg ngosuku. Kodwa-ke, abukho ubufakazi obuqinisayo obusekela amanani okulingana.
Zibukeka sengathi izilinganiso ezijwayelekile zemikhiqizo equkethe i-dimethylamylamine. Amagugu avela kuzincomo zokusetshenziswa ezinikezwe abakhiqizi be-DMAA ezithengiswayo okwamanje emakethe.
Akufanele usebenzise umkhiqizo we-DMAA nsuku zonke uma ufuna ukufeza imiphumela emihle kakhulu. Iningi lama-DMAA supplements liwadla kabili kuya kathathu ngeviki kakhulu. Ngokusebenzisa izithako ezinjalo, ulawula kalula ukugwema ukuthembela emikhiqizweni.
Okungcono, sebenzisa amaphilisi e-DMAA uma udinga amandla noma ugxila ekugxileni noma cishe imizuzu engu-30 ngaphambi kokuzivocavoca umzimba. Ngokwenza kanjalo, uzokwazi ukugwema okuthile ukulimala kokuqala kokungeziwe kokusebenza.
I-4 I-Best World Yokuthengisa I-Fat Burning Drugs
Kukhona izidakamizwa ezihlukahlukene ezisiza ukulahleka kwezinto ngokunciphisa ukufisa, ukukhulisa umzimba wesimiso kanye / noma ukugcina ukudla okulungile. Imithi evuthayo yamafutha angenza umuntu akwazi ukukhulisa amandla okuzivocavoca ngokwandisa amandla akhe nokugxila.
Ithebula elilandelayo libonisa izidakamizwa ezine ezidayiswayo zokuthengisa amafutha emhlabeni jikelele.
Igama lomuthi negama le-CAS Isebenza kanjani
I-Synephrine powder -CAS: 94-07-5 I-Synephrine powder i-beta-agonist esebenza ngokwandisa isilinganiso somzimba womuntu, ukusetshenziswa kwekhalori namazinga kagesi
I-1,3-dimethylamylamine (i-DMAA powder) - I-CAS 13803-74-2 Ngesakhiwo samakhemikhali esifana neka-Efdrine, i-1,3-dimethylamylamine iyisisindo se-neural stimulant esisetshenziselwa njengesithako esikhulu ekwenzeni okunomsoco ukuze kusize ekuthuthukiseni ukusebenza kwezemidlalo nokuqinisa amandla.
I-Clenbuterol hydrochloride-I-CAS 21898-19-1 Ngaphandle kokuba namandla amakhulu okushisa amafutha, i-Clenbuterol hydrochloride nayo ine-effect ephawulekayo ye-thermogenic ngokwandisa ukucindezelwa kwegazi futhi yenza inhliziyo isebenze kanzima.
Ngaphandle kwalokho, kubangela ukubola kwe-glycogen, ngakho-ke ukushisa kwamafutha omzimba.
I-Salbutamol (i-Albuterol) - I-CAS 18559-94-9 I-salbuterol powder ekuqaleni yayisetshenziswa abantu abane-asthma noma isifo se-chronic obstructive pulmonary ukuthuthukisa ukuphefumula kwabo. Kodwa-ke, namuhla, lesi sidakamizwa sisetshenziselwa kakhulu ukukhuthaza ukulahleka okusheshayo kwamafutha, ukugcinwa kwemisipha phakathi nokulawulwa kokulahlekelwa kwamafutha kanye nokwandisa ukukhuthazela lapho umuntu enza umsebenzi wokulahleka kwamafutha.
Uma ufuna ukuthenga i-dmaa noma noma yikuphi kwalezi zidakamizwa ezishisayo ezingenhla, ungamane usebenzise ukuhlukunyezwa okuvela ku-AASraw, com.
I-1, i-3-dimethylamylamine inikeza izinzuzo eziningi ezihlanganisa nokusiza ekuthuthukiseni imemori yesikhathi esifushane kanye nesenzo esicacile kanye nokwakhiwa komzimba nokushiswa kwamafutha omzimba. Kodwa-ke, kufanele uqinisekise ukuthi uthintana nomhlinzeki wezempilo ohloniphekile futhi unamathele kumthamo wokunconywa ukugwema imiphumela emibi njengengcindezi ephezulu yegazi, izinkinga zenhliziyo nokulimala kwezinso, phakathi kwezinye izingozi zempilo ezihambisanayo.
Noma kunjalo, ukubambelela kwesilinganiso esifanele akusona isiqinisekiso sokuthi ngeke uhlangabezane nemiphumela emibi. Futhi, kufanele kuqaphele ukuthi akukho bufakazi besayense obuxhumanisa le miphumela ngokuqondile ukusetshenziswa kwe-DMAA kuphela; okungukuthi, lapho kungekho khona izithako ezengeziwe.
I-Bloomer RJ1, Farney TM, i-Harvey IC, i-Alleman RJ - Iphrofayili yokuphepha ye-caffeine ne-1,3-dimethylamylamine ukwengezela kwamadoda aphilile - Hum Exp Toxicol. 2013 Nov; 32 (11): 1126-36. i-doi: 10.1177 / 0960327113475680. I-Epub 2013 Feb 19.
I-Schilling BK (1), uHammond KG, i-Bloomer RJ, i-Presley CS, i-Yates CR. - Imiphumela ye-Physiological and pharmacokinetic yomlomo we-1,3-dimethylamylamine ukuphathwa kwamadoda - BMC Pharmacol Toxicol. 2013 Oct 4; 14: 52. i-doi: 10.1186 / 2050-6511-14-52.
"I-1,3-Dimethylamylamine," i-Examine.com, eshicilelwe ngo-24 April 2014, igcine ukubuyekezwa ngo-14 Juni 2018,
I-Vorce SP, et al. I-Dimethylamylamine: izidakamizwa ezenza imiphumela emihle ye-immunoassay ye-amphetamines. I-Toxicol e-Anal. (I-2011)
Gee P, uJackson S, Easton J. Enye ipilisi ebabayo: icala lobuhlungu obuvela ezipilini zenkampani ye-DMAA. I-NZ Med J. (I-2010)
I-Merck Index: i-Encyclopedia of Chemicals, iDrugs, ne-Biologicals (Incwadi).
Lisi A, et al. Izifundo ze-methylhexaneamine emafutheni ase-andgeranium. I-Anal Test Test. (I-2011)
I-Bloomer RJ, et al. Imiphumela ye-1,3-dimethylamylamine ne-caffeine yodwa noma ehlangene ngesilinganiso senhliziyo nokucindezelwa kwegazi kumadoda nabesifazane abaphilile. Phys Sportsmed. (I-2011)
Ama-Nootropics ama-7 amahle (ama-Smart Drugs) emakethe ye-Noopept
Ukubuka okujulile kwe-Testosterone Cypionate I-Top 10 testosterone ester: okulungile kuwe?